FJKM Atsimon’Imahamasina: namoy ny ainy ny prezidan’ny AFF, naratra ny mpitandrina | NewsMada
Par Taratra sur 17/09/2018
Iray maty, 15 naratra. Io ny vokatry ny lozam-pifamoizoizana nitranga, omaly maraina, tany Ilempona-Antanifotsy. Fiara Sprinter iray, avy any Mahajanga, nianatsimo ho any Fandriana, no nifandona tamina fiara madinika, Mazda3, avy any Morondava.
Raha ny sary miparitaka any amin’ny tambajotran-tserasera rehetra any, hita ho mafy ny fifandonan’ireto fiara roa ireto. Potika tanteraka ny lohan’ilay fiarakely, nisy ilay namoy ny ainy, izay filohan’ny sampana Asa fitoriana ny Filazantsara (AFF), ao amin’ny FJKM Atsimon’Imahamasina, Ramalanjaona Raobena, araka ny voalaza ao amin’ny pejy “facebook” an’ny antoko mpihira Tsantan’Imahamasina.
Fantatra fa tao anatin’ity fiarakely ity koa ny mpitandrina ao amin’ny FJKM Atsimon’Imahamasina, ny mpitandrina Ranaivoniarivo Tiana Alisoa, mivady sy ny prezida synodaly ao Ambovombe Atsimo Kristy Ranovelona, i Soja Arthur. Samy naratra mafy avokoa izy ireo. Avy nanatrika ny fihaonamben’ny AFF, tany Morondava, izy ireo.
Tsy nisy noraisina, toy izany koa, ny anoloan’ilay fiara Sprinter, nahitana olona maromaro naratra sy nihosin-dra, izay nentina avy hatrany tany amin’ny hopitaly ao Antanifotsy.
Samy manana ny filazany ny olona, any anaty tambajotran-tserasera any, mikasika ny antony nahatonga ity loza mahatsiravina ity.
Raha ny nambaran’ny borigadin’ny zandarimaria ao Antanifotsy hatrany, tsy mbola mazava, hatreto, ny tena nitarika ny loza ary ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka izy ireo. Efa nentina aty Antananarivo moa ny nofomangatsiak’ilay nindaosin’ny fahafatesana. Mbola misy kosa ny tsaboina any Antanifotsy.
Mbola tany amin’ny lalam-pirenena fahafito ihany, saingy teo anelanelan’Alakamisy-Ambohimaha sy Fianarantsoa, fiara telo no indray nifandona. Tsy nisy kosa ny aina nafoy tamin’ity lozam-pifamoivoizana ity.
Ivandry, noraisin’ny primatiora ny fitsaboana ireo ankizy voadona
Ankizy roa no indray voadonan’ny fiara mpanara-dia ny praiminisitra, ny zoma hariva teo teny Ivandry. Tsy misy ahina intsony ny ain’ny iray raha toa ka mbola nanahirankirana ny iray hafa, araka ny fanambarana nivoaka ny zoma alina. Samy tsaboina eny amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha avokoa izy ireo, ary miantoka ny lany rehetra amin’izany ny fiadidiana ny praiminisitra.
Raha tsiahivina, tezitra ireo nahita ity lozam-pifamoivoizana ity ka nodoran’izy ireo ilay fiara namoa-doza, izay fantatra fa nirimorimo sy tany amin’ny faritra tsy tokony ho nalehany. Raha ny voalazan’ity fanambaran’ny primatiora ity kosa, teny afovoan’arabe ireo ankizy ary amin’ny fotoana mahabetsaka ny fiara mifamoivoy.
« Filohana andrimpanjakana ny praiminisitra ka ho fiarovana ny ainy, misy ny tombony manokana homena ny fiara mitondra azy sy ny mpanara-dia amin’ny fampiasana ny lalana… Noho ny zava-nitranga, nohamafisina ny fiambenana azy », hoy hatrany ny fanambarana.